Naya Drishti | बिलगेट्स - मिलिन्डाको डिभोर्स हुदा छोराछोरीले कति पाउने छन- पैतृक सम्पत्ति ? - Naya Drishti बिलगेट्स - मिलिन्डाको डिभोर्स हुदा छोराछोरीले कति पाउने छन- पैतृक सम्पत्ति ? - Naya Drishti
वैशाख २२, काठ्माण्डौ । माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स र उनकी श्रीमती मिलिन्डा गेट्स अलग्गिँदै छन् । यी दुईले विवाहको २७ वर्षपछि सम्बन्धविच्छेदको घोषणा गरेका हुन् । बिल गेट्स र मिलिन्डा गेट्स एक छोरा र दुई छोरीका आमा–बुवा हुन् । छोराको नाम ररी र छोरीको नाम जेनिफर र फियोबी हो ।
रातोपाटी बाट ।
बिलगट्सले किन गरे, पत्नी सँग सम्बन्धविच्छेद ?